2 Tantara 28 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 28:1-27
28 Roapolo taona i Ahaza+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary enina ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema.+ Ary tsy nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah izy, tsy mba toa an’i Davida razambeny.+ 2 Nanao hoatran’izay nataon’ireo mpanjakan’ny Israely kosa izy,+ ka nanao sarivongan’ireo Bala+ tamin’ny metaly.+ 3 Nanolotra setroka ho sorona+ teo amin’ny lohasahan’ny taranak’i Hinoma+ koa izy, ary nandoro ny zanany tao anaty afo.+ Zava-maharikoriko+ fanaon’ireo firenena noroahin’i Jehovah tsy ho eo anatrehan’ny zanak’Israely izany nataony izany.+ 4 Ary nanao sorona+ sy nanolotra setroka ho sorona foana izy, teny amin’ny toerana avo+ sy ny havoana+ ary teny ambanin’ny hazo midoroboka rehetra.+ 5 Koa natolotr’i Jehovah Andriamaniny teo an-tanan’ny+ mpanjakan’i Syria+ izy. Dia namely azy ny Syrianina, ka naka babo maro be, izay nentin’izy ireo tany Damaskosy.+ Natolotr’Andriamanitra teo an-tanan’ny mpanjakan’ny Israely+ koa izy. Dia namely azy ny mpanjakan’ny Israely ka nahafaty be dia be. 6 Koa lehilahy mahery fo niisa roa alina sy iray hetsy no matin’i Peka+ zanak’i Remalia+ tany Joda tao anatin’ny iray andro, satria nahafoy an’i Jehovah+ Andriamanitry ny razany izy ireo. 7 Novonoin’i Zikry lehilahy matanjaka avy any Efraima+ koa i Mahaseia zanaky ny mpanjaka, sy Azrikama mpiandraikitra ny ankohonan’ny mpanjaka, ary Elkana izay nanarakaraka ny mpanjaka. 8 Ary naka babo zaza amam-behivavy roa hetsy avy tamin’ireo rahalahiny ny zanak’Israely, sady nandroba zavatra maro be. Dia nentiny tany Samaria+ ireny. 9 Ary nisy mpaminanin’i Jehovah iray atao hoe Odeda, nitsena an’ilay tafika tonga tao Samaria ka niteny hoe: “Tezitra+ tamin’ny Joda i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, ka izany no nanolorany azy ireo teo an-tananareo. Dia novonoinareo tao anatin’ny fahatezerana mafy+ manakatra ny lanitra+ izy ireo. 10 Izao dia kasainareo hatao mpanompolahinareo+ sy mpanompovavinareo koa ny taranak’i Joda sy Jerosalema. Angaha ianareo koa tsy mba meloka eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrareo? 11 Koa mihainoa ahy, ka avereno ireo babo nalainareo avy tamin’ny rahalahinareo ireo,+ fa mirehitra aminareo ny fahatezeran’i Jehovah.”+ 12 Koa nijoro hanohitra an’ireo avy nanafika i Azaria zanak’i Johanana sy Berekia zanak’i Mesilemota sy Jehizkia zanak’i Saloma ary Amasa zanak’i Hadlay, izay samy lohany+ teo amin’ny taranak’i Efraima,+ 13 ka niteny tamin’izy ireo hoe: “Aza entina atỳ ireo babo, sao ho meloka eo anatrehan’i Jehovah isika. Tadiavinareo hampiana indray ve ny fahotantsika sy ny helotsika? Efa be ny helotsika,+ ary mirehitra amin’ny Israely ny fahatezeran’Andriamanitra.”+ 14 Koa navelan’ny miaramila+ teo anatrehan’ny andriana+ sy ny fiangonana manontolo ireo babo+ sy ny zavatra norobainy. 15 Dia naka an’ireo babo ny olona voatonona anarana,+ ary izay rehetra tsy nitafy dia nampiakanjoiny tamin’ny zavatra azo babo. Eny, nampiakanjoiny+ sy nomeny kapa izy ireo, sady nomeny sakafo+ sy rano hosotroina+ ary nohosorany menaka. Ary izay nangozohozo dia nampitaingeniny ampondra+ ka nateriny tany amin’ny rahalahiny tany Jeriko,+ tanàna be hazo palmie.+ Taorian’izay vao niverina tany Samaria+ ireo mpanatitra. 16 Ary nandefa iraka nankany amin’ireo mpanjakan’i Asyria+ i Ahaza Mpanjaka,+ mba hangataka azy ireo hanampy azy. 17 Tonga indray mantsy ny Edomita+ ka namely ny Joda ary naka babo. 18 Ny Filistinina+ koa nanafika an’ireo tanànan’i Sefela+ sy Negeba+ tany Joda ka namabo an’i Beti-semesy,+ Aialona,+ Gederota,+ Soko+ sy ireo tanàna miankina aminy, Timna+ sy ireo tanàna miankina aminy, ary Gimzo sy ireo tanàna miankina aminy. Ary nipetraka tao amin’ireo tanàna ireo ny Filistinina. 19 Fa nampietren’i Jehovah+ ny Joda noho ny amin’i Ahaza mpanjakan’ny Israely, izay namela ny Joda hanaram-po tamin’ny ratsy,+ sady nivadika tamin’i Jehovah. 20 Farany dia nanafika azy i Tilgato-pilnesera+ mpanjakan’i Asyria, ka nampahory+ azy fa tsy nampahery azy. 21 Dia nalain’i Ahaza ny zava-drehetra tao an-tranon’i Jehovah+ sy tao an-tranon’ny mpanjaka+ sy ny andriana,+ ka nataony fanomezana ho an’ny mpanjakan’i Asyria,+ saingy tsy nahavonjy azy izany. 22 Vao mainka anefa nivadika tamin’i Jehovah i Ahaza Mpanjaka, tamin’ny fotoana nampahorian’ny mpanjakan’i Asyria azy.+ 23 Dia nanao sorona ho an’ireo andriamanitr’i+ Damaskosy+ izay namely azy izy, ka niteny hoe: “Manampy an’ireo mpanjakan’i Syria ny andriamaniny,+ ka hanolorako sorona mba hanampiany+ ahy koa.” Koa ireo andriamanitra ireo no nanjary vato mahatafintohina teo anoloany sy ny Israely rehetra.+ 24 Nangonin’i Ahaza koa ny fitaovana+ tao an-tranon’Andriamanitra+ ka nopotipotehiny, ary nohidiany ny varavaran’ny+ tranon’i Jehovah. Dia nasiany alitara isaky ny zoron-dalana tao Jerosalema.+ 25 Ary nasiany toerana avo+ tany amin’ny tanànan’i Joda rehetra, mba hanolorana setroka ho sorona ho an’andriamani-kafa.+ Koa nampahatezitra+ an’i Jehovah Andriamanitry ny razany izy. 26 Ary ny sisa amin’ny tantaran’i+ Ahaza sy izay rehetra nataony, na ny voalohany na ny farany, dia efa voasoratra ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Joda sy Israely. 27 Farany dia nodimandry any amin’ny razany i Ahaza, ka nalevina tao an-tanàna tao Jerosalema, fa tsy nampidirina tao amin’ny fasan’ireo mpanjakan’ny Israely.+ Ary i Hezekia zanany no nanjaka nandimby azy.